DHEGEYSO-Xoolo dhaqato horleh oo ku cayroobey gobolka Nugaal. – Radio Daljir
Diseembar 11, 2016 3:30 b 0
Burtiinle, Dec 11 2016-Iyadoo Dhawaan Wasaarada Xanaanada Xoolaha ee Dowlada Puntland aya Kawaday Talaalka Xoolaha deegaanada Miyiga ah ayaa Waxaa Soobaxaysa in Talaalkasi uu sababay in xoolo badan ay kubaxaan ama ay kubaqtiyaan.
Deegaanada Talaalkaasi uu kasocdo ayaa Waxaa kamid aha Deegaanka Godobar oo qiyaastii Dagmada Burtinle ujira 25kmir .
Cabdi Samad Cali Cilmi Waxa uu Kamidyahay Xoolo dhaqatada Deegaanka (Godobar.) Waxa uu Talaalkaasi uu kuwaayay in kabadan Boqol neef oo Ari Ah oo nxediisa halmar nkabaxay ,waxa uu sheegay in Talaalka kaho arigiisu uu caafimaad Qabay .
DHEGEYSO-Gudiga gurmadka abaaraha Puntland oo deeq lawareegey.